Ny lisitra fandefasana mailaka farany sy feno anao! | Martech Zone
Tsy hahomby izany…… indray mandeha isan-kerinandro aho dia mahazo mailaka tsara ao anaty boaty misy ahy mitondra ny lohateny hoe FNAME na collage misy sary tsy misy soratra hafa. Na azoko amin'ny ahy ilay izy fampisehoana retina miaraka amin'ny sary manjavozavo. Na manokatra azy amin'ny findaiko aho ary tsy afaka mamaky azy satria ny mailaka finday tsy nandray andraikitra.
Raharaham-barotra matotra ny mailaka… fampandrenesana fanerena mifototra amin'ny fahazoan-dàlana tokony hataon'ny orinasanao manoloana ny mpanjifanao izany. Feno hipetraka ireo boaty mailaka ary mitady fialan-tsiny ny rehetra mba hanamorana ny enta-mavesatra sy hisoratra anarana. Tsy dia ilaina loatra ny sakanana, atsipy ao anaty folder SPAM, hamafana alohan'ny hisokafana, tsy hisoratra anarana - na ny ratsy indrindra - notaterina ho SPAM.
Ny ekipa ao amin'ny Email Monks dia eo aminy indray, avy amin'ny torohevitra momba ny mampiditra horonan-tsary amin'ny mailaka amin'ity - a lisitra feno ho an'ireo mpandefa mailaka hamakivaky alohan'ny tsindrio send!
Fotoana izao handefasanao mailaka amin'ny mpamandrika ary matahotra ianao gazety SEND satria tsy azonao antoka raha nahazoanao tsara daholo, fa aza matahotra fa Monks ho famonjena indray izao! Miaraka amin'ireo orinasa milaza fa hanao izany izy ireo hampitombo ny fampiasana marketing amin'ny mailaka amin'ny 2014, ilaina ny fananana lisitra mazava hanarahana azy alohan'ny hamelezana ny SEND. Ka ity misy iray mahasasatra ho anao!
Ny lisitra fizahana dia mandalo anao amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka, mifanentana amin'ny mpanjifa mailaka, topi-maso ao anaty boaty, ary topy maso mialoha mba hahazoana antoka fa tsara sy mandeha tsara ny zava-drehetra alohan'ny andefasanao! Raha tianao dia afaka manao izany ianao misintona kinova fanontana apetraka eo ambonin'ny latabatrao eo akaikinao!
Tags: FANARAHAN'NY SPAMCan-amin'ny spamlisitramailaka analyticsfanadihadiana momba ny fampielezana mailakalisitra fanamarinana mailakamifanentana amin'ny mpanjifa mailakalisitra fanaterana mailakamailaka footerfandefasana html mailakamailaka sary altrohy mailakamailaka hanokatra topi-masopersonalization mailakamailaka lahatsoratra tsotradaty fandaharam-potoana mailakalahatsoratra sombintsombin'ny mailakabokotra fizarana sosialy mailakafitsapana spam amin'ny mailakatsipika momba ny mailakarohy famandrihana mailakamailaka amin'ny Internetmailaka isan'oraavy amin'ny adiresysary alt tagtanisao ny fahadiovanafizarana lisitranahitsin'ivalio ny adiresyandalana foto-kevitrato address
Ny varotra mailaka dia Evolisiona, fa tsy ny revolisiona, ary ny antony tsy tokony handraisanao azy